सिएमसी क्विजको ९ औं संस्करण सुरु | Makalukhabar.com
सिएमसी क्विजको ९ औं संस्करण सुरु
माघ २१, काठमाडौं । सिएमसी करीयर क्विजको ९ औं संस्करण माघको तेस्रो सातादेखि पोखरा बाट अडिसन सुरु भएको छ ।
बुटवलमा माघ २२ गते, चितवनमा माघ २४ गते, बिराटनगरमा माघ २७ गते र अन्तिम अडिसन काठमाडौंमा फागुन २ गतेका लागि तोकिएको आयोजक सँस्था मिटिङ्ग प्वाइन्ट प्रा.लि.ले जनाएको छ ।
अडिसनका लागि तोकिएको स्थानमा लिखित र मौखिक परीक्षामार्फत क्वालिफाइङ राउण्ड खेल्ने टिमको छनोट गरिने छ । राजधानी र राजधानी बाहिरका प्रतिस्पर्धी मध्ये कम्तिमा ५० टिमलाई छनोट गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
क्विज प्रतियोगितामा सामेल हुन चाहने विद्यार्थी तथा विद्यालयले तोकिएको मिति र स्थानमा आफ्नो टिमको नाम दर्ता गर्नुपर्ने छ । सिएमसि करिअर क्विजको फेसबुक पेज www.facebook.com/cmccareerquiz तथा मिटिङ्ग प्वाइन्टको आधिकारिक वेबसाइट www.meetingpoint.com.np मार्फत पनि क्विजमा सहभागिताका लागि थप जानकारी पाउन सकिन्छ ।
दुवै ठेगानामा सहभागिताको फारम उपलब्ध हुनेछ भने एउटा शैक्षिक संस्थाबाट एक टिममा २ जना हुने गरी बढिमा २ टिमसम्मले अडिसनमा सहभागिता जनाउन सक्ने क्विजका प्रमुख कार्यकारी निर्माता सुरेश सिम्खडाले बताए ।
पोखरामा सम्पन्न अडिसन बाट ३ वटा टिमले क्वालिफाइङ राउण्ड खेल्नका लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन् भने तोकिएको बाँकी स्थानहरुमा अडिसन हुने आयोजकले जनाएको छ ।
सन् २०१० देखि औपचारिक रुपमा सुरु भएको करिअर क्विजको यो ९ औं संस्करण हो । देशका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरुले सञ्चालन गर्ने प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम करिअर क्विजका बिजेता टिमलाई नगद पुरस्कारसँगै ट्रफि, मेडल, प्रमाणपत्र र आकर्षक छात्रवृत्ति समेत प्रदान गरिने छ ।
नविनतम प्रबिधिको प्रयोग गरि छायांकन गरिने क्वालिफाइङ राउण्डदेखिका सबै खेलहरु एपी वान एचडी टेलिभिजनबाट आगामी बैशाखको पहिलो साताबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमका निर्माता तथा निर्देशक रजिन महर्जनले जनाएका छन ।
पर्यटन सुदुरपश्चिम समृद्घिको आधारः ढकाल
विद्यार्थीलाई कुटपिट गरि घाइते बनाउने शिक्षक पक्राउ
साउन ७, पोखरा । गृहकार्य नगरेको आरोपमा विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्ने पोखराका एक शिक्षक आज पक्राउ परेका छन् । विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पोखरा–२५ स्थित हेम्जा आवासीय विद्यालयका शिक्षक श्रीराम त्रिपाठीलाई पक्राउ गरिएको कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सो विद्यालयमा अध्ययनरत १४ वर... जारी राख्नुहोस...
साँगा प्रहरी विद्यालयमा क्याम्प कमान्डेड र प्राचार्यको मिलेमतोमा विद्यार्थीलाई कमसल सामान दिएको गुनासो
साउन ५, काभ्रे । आफ्ना सन्ततीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अभिप्रायले काभ्रे स्थित साँगा प्रहरी विद्यालयमा बालबालिका भर्नागर्ने अभिभावकहरु यतिबेला बालबालिका पढाउने कि निकाल्ने धर्मसंकटमा छन् । विद्यालयले अस्वभाविक रुपमा बढाएको शुल्क तथा लत्ता कपडाको रेट सुनेर अभिभावकहरुको पसिना छुटेको छ । त्यसो... जारी राख्नुहोस...
एइसीको मोटिभेसनल एण्ड करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम सम्पन्न
साउन ३, काठमाडौं । प्लस टु पास गरिसकेपछि उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने सोच बनाइरहेका विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियन एजुकेशन कन्सल्टेन्ट (एइसी) ले एक दिने मोटिभेसनल एण्ड करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम गरेको छ । बागबजार स्थित होटल हार्दिकमा आयोजित कार्यक्रममा साइकोलोजिस्ट तथा मोटिभेसनल स्पीकर रविन कट्वालले सह... जारी राख्नुहोस...
मेडिकल शिक्षाका लागि कहाँ जाने ?
असार ३१, काठमाडाैं । मेडिकल शिक्षा धेरै विद्यार्थीको रोजाईको विषय भएपनि कमै मात्र विद्यार्थीले पुरा गर्न सक्छन् । खर्चिलो तथा अन्य विषय भन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने विषयमा मेडिकल शिक्षा पर्दछ । तथापि, मेहनत गर्नेलाई असंभव भने छैन है । नेपालमै मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्ने अथवा विदेश गएर हासिल गर्ने दुवै... जारी राख्नुहोस...
Multi-spectral Possibilities in Australia
Hom Dawadi is the CEO of Australian educational consulting. Dawadi with his adequate experience at Australia hasaverdict that Nepali students must go to Australia to have an exposure of practical education and skills. His offices are at bagbazar Kathmandu and also at Australia, lets hear few words... जारी राख्नुहोस...
राप्तीमा विपन्न परिवारका दिदिभाईलाई स्टेसनरी र खाद्यान्न सहयोग
असार २९, चितवन । आर्थिक अभावका कारण पठनपाठनमा समस्या झेल्दै आएका राप्ती नगरपालिका ६ मुडाभारका दिदि भाईलाई सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ । मुडाभारकी अनुजा परियार र उनका भाई अनमोल परियारलाई आईतवार स्टेशनरी र खाद्यान्न सहयोग गरिएको हो । घरको अवस्थाका कारण पढाई देखी खान लाउन समेत समस्या रहेको राप्ती नगरपाल... जारी राख्नुहोस...
विद्यार्थी टिकाउने विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान
असार २८, चितवन । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या वढाउन सफल नगर भित्रका २ वटा विद्यालयलाई खैरहनी नगरपालिकाले अनुदान प्रदान गरिएको छ । साथै गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) र आधारभूत शिक्षा उर्तिण परिक्षामा उत्कृष्ठ नजिता ल्याउने २ वटा विद्यालयलाई नगदसहित सम्मान गरिएको छ । सामुदायिक... जारी राख्नुहोस...
इक्यान मेला: मुसलधारे पानीमा पनि उत्साहजनक सहभागिता
असार २७ काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को आयोजनामा राजधानीमा बिहीबारदेखि सुरु १३ औं इक्यान शैक्षिक मेलामा दोस्रो दिन सकिएको छ । इक्यानका अनुसार दोस्रो दिन मुसलधारे पानीमा पनि विद्यार्थीको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ । शुक्रबार बिहानैदेखि मुसलधारे पानी परेकाले विद्यार्थीको चाप पहिलो द... जारी राख्नुहोस...
प्रदेश १ का सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था मध्यम स्तरको
असार २७, विराटनगर ।शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले प्रदेश १ को सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरुको अवस्था मध्यम रहेको जनाएको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सानोठिमी विराटनगरमा आयोजना गरेको सरोकारवालाहरुसँग भएको छलफल कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिइएको हो । शैक्षिक गुणस्तर परीक्ष... जारी राख्नुहोस...